ဒင်ဗာမြို့မှလေဆာအဝတ်လျှော်ထွင်းထု - ဝူဟန်ရွှေလေဆာ Co. , Ltd မှ
ဒင်ဗာမြို့မှလေဆာလျှော်အက္ခရာ တင်. Solutions
ဂျင်းဘောင်းဘီ / T-Shirt / အဝတ်အစား / Jacket / Corduroy
သီးခြားထွင်းထု / ပါးသိုင်းမွေး / မျောက်ရေဆေး / Gradient / အဆင်သင့်-to-ဝတ်ဆင် / ဝမ်းခွဲ 3D ဖန်တီးမှုထွင်းထုဒင်ဗာမြို့မှ
မိုးပြာရောင်အဝတ်လျှော်စက်မှုလုပ်ငန်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှု - ဂျင်းလေဆာထွင်းထု , ဒီဥရောပမှာရှိတဲ့ပင်မနည်းပညာဖြစ်လာသည်။
ဒင်ဗာမြို့မှလေဆာအဝတ်လျှော်သည့်စနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ automatic အပြောင်းအလဲနဲ့ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမသာဖန်တီးမှုသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်း, စာလုံးနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ, လက်ဖြီး, ပါးမုနျးမှေး, မျောက်လက်ဆေးနားလည်သဘောပေါက်ရိုးရာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဝမ်းခွဲ, ဒါပေမယ့်လည်းလိုင်းများစွဲဖို့လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပါ, ပန်းရင်ဆိုင်နေရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဝတ်လျှော်လုပ်ငန်းစဉ်၏အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်လည်းကိုယ်ပိုင်အသေးစားသုတ်စိတ်ကြိုက်များ၏စျေးကွက်အလားအလာနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်မသာ။
ထိုကဲ့သို့သောပါးမုနျးမှေး, 3D ပါးမုနျးမှေး, မျောက်ရေဆေး, gradient ကို, ဝမ်းခွဲနှင့်မဆိုဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းများ, အလွယ်တကူရဖို့ပဲလေဆာအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များ၏တစ်ဦးကအမျိုးမျိုး။
ရိုးရာကို manual အလုပ်, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါလေဆာထွင်းထုထုတ်ကုန်မြင့်မားစွာတသမတ်တည်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်အရည်အသွေးကိုရှိပါတယ်ပြီးဆုံး။
အနိမ့်သော Operating ကုန်ကျစရိတ်
ဥရောပနည်းပညာ, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော, အနည်းငယ်မျှသာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်, သာတစ်နာရီလျှင်7ကီလိုဝပ်နာရီလိုအပ်ပါတယ်။
GOLDEN laser - လေဆာအဝတ်လျှော်ထွင်းထုသည့်စနစ် ဂျင်းထည်ထုတ်ကုန်များအမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရာဖြစ်စဉ်များဓာတုဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏ပမာဏကြီးမားတဲ့တို့ကိုလောင်ပါနဲ့မျိုးစုံအလျင်ကရေစွန့်ပစ်စေနှင့်, ဆေးရုံကဆင်းမိလ္လာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လေဆာအဝတ်လျှော်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်ဂျင်းဘောင်းဘီ၏အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုပြီးဆုံး။
လေဆာအဝတ်လျှော်ထူးခြားတဲ့ High-end Boutique မိုးပြာရောင်ကိုဖန်တီးရန်အချို့သောရိုးရာနည်းစနစ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်။
လေဆာအဝတ်လျှော်ထွင်းထုစနစ်မိုးပြာရောင်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောသားရေ, အကျီ T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့် corduroy သောအဝတ်အဖြစ်ပလီကေးရှင်းမီနိုင်တဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသောအထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်ပစ္စည်းများမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်မသာ။ 2D / 3D ဖန်တီးမှုထွင်းထုအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ကုန်၏ကျယ်ပြန့်တန်ဖိုးကိုအာကာသပိုကောင်းစေပါတယ်။
လေဆာလျှော်အက္ခရာ တင်. စနစ်
ဒီနည်းကို laser ကိုလျှော်အက္ခရာ တင်. SYSTEM Special ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ဒင်ဗာမြို့မှဝတျရုံအက္ခရာ တင်. FOR ထုတ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: ZJ (3D) -9090LD / ZJ (3D) -125125LD
လေဆာရောင်ခြည်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ထွင်းထုသည့်စနစ်ဒင်ဗာမြို့မှ၎င်း၏အလုပ်လုပ်နိယာမဒီဇိုင်းကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်, layout ကိုနှင့် PLT သို့မဟုတ်, BMP ဖိုင်တွေလုပ်, ပြီးတော့ကွန်ပျူတာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအဝတ်ထည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေဆာရောင်ခြည်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်စွဲစေရန်အတွက် CO2 လေဆာထွင်းထုစက်ကိုသုံးပါ ။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်စွဲအကြောင်းမဲ့အဆိုပါကြိုး, ablated သည်ဆိုးဆေးအငွေ့ပျံစေသောသည်, စွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောနက်နဲရာတစ်ပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအဝတ်လျှော်အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤရွေ့ကားပုံစံများသည်လည်းအနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ပန်း, sequins, သံနှင့်သတ္တုပစ္စည်းများနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဂရပ်ဖစ်ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ Professional ကဆော့ဖျဝဲ, ။